Nokia က | | OS ကို-STORE ဘလော့ခ်
ယခုနှစ် OS ကို-STORE ကြီးတွေပြန်အဆုံး, ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသစ်အဟောင်းဖောက်သည်ကျေးဇူးတင်နိုင်ရန်အတွက်, the companycut prices of Nokia X1-01 mobile phone（black）.The event starting today, […]
သြဂုတ်လ 27, 2014 admin ရဲ့ 0
Nokia Lumia 710 towards the low-end market, which use Microsoft’s Windows Phone operating system of it. အောက်တိုဘာလ 26, 2011, released by Nokia in the opening […]
သြဂုတ်လ 22, 2014 admin ရဲ့ 0
ဇူလိုင်လ 16, 2014 osstevejobs 0
မူရင်း Nokia စီးရီး X 2.0 စံနစ်
ဇွန်လ 28, 2014 osstevejobs 0
ဇွန်လ 14, 2014 OS ကိုထုတ်ကုန်များ 0
Nokia has published three Android phones, one of the cheapest is Nokia X gained quiteagood response in china. ယခု,alarge Nokia XL […]
လိုအပ်သောစွမ်းရည်ရှိသောမိုဘိုင်းဖုန်းများကိုယူပါ – အဆိုပါ SLR ရှေးဟောင်းပစ္စည်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်: nokia 1020
ဇွန်လ 6, 2014 osshakespeare 0
Nokia က 1020 နှင့်အတူ 41 SLR ရဲ့ဆဲလ်ဖုန်းအဖြစ်သန်း pixels ကို. Nokia 1020 ကုမ္ပဏီ၏ nokia စီးရီး၏ရိုးရာဒီဇိုင်းကိုဆက်လက်ပြုလုပ်ခဲ့သည်, ယင်း၏ကိုအသုံးပြုခဲ့သည် […]
စီပီယူ Samsung က Intel က Technology_Internet processor ​​ကို Nokia က ဥပဒေရေးရာအနက် Software များ ပရိုဆက်ဆာ စက်ပစ္စည်းကိရိယာမန်နေဂျာ HTC က ပြည်သူ့ရည်ရွယ်ချက် 64-နည်းနည်းက Windows OS ကို-STORE မိုဘိုင်းဖုန်း HD Graphics ကားမောင်းသူထောက်ခံမှု စီးရီးယာဉ်မောင်းပံ့ပိုးမှု device ကိုမော်ဒယ် နည်းပညာ
Samsung က Intel က OS ကို-STORE HD Graphics 64-နည်းနည်းက Windows ဥပဒေရေးရာအနက် Technology_Internet ပရိုဆက်ဆာ device ကိုမော်ဒယ် Sony Ericsson က စီးရီးယာဉ်မောင်းပံ့ပိုးမှု မိုဘိုင်းဖုန်း Nokia က စမတ်ဖုန်းများ စက်ပစ္စည်းကိရိယာမန်နေဂျာ စီပီယူ Software များ နည်းပညာ Samsung ရဲ့ Galaxy ပြည်သူ့ရည်ရွယ်ချက် processor ​​ကို Intel က Server ကို HTC က Qualcomm မှ ကားမောင်းသူထောက်ခံမှု